माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडकाे एकैदिन ३ वटा शाखा उद्घाटन – kalikadainik.com
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडकाे एकैदिन ३ वटा शाखा उद्घाटन
शुक्रबार, मंसिर २१, २०७५ | १०:५८:४८ |
खोलेसिमल, चितवन, २१ मंसिर ।
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको आज एकैदिन ३ वटा नयाँ शाखा उद्घाटन गरिएको छ । चितवनको कालिका नगरपालिका स्थित खोलेसिमल बजारमा बैंकले कालिका शाखाको एक कार्यक्रमका बिच उद्घाटन गरेको हो ।
सो बैंकको कालिका शाखा कालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ र बैंकका संचालक गोपीकृष्ण न्यौपानेले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ, कालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष बिनोद रेग्मी, बैंकका परासी शाखा प्रमुख भानुभक्त अधिकारी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम बैंकका संचालक गोपीकृष्ण न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
बैंकको कालिका शाखा संचालन भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले सहज रुपमा रकम बचत गर्न र ऋण प्राप्त गर्न सक्ने शाखा प्रमुख हेम प्रसाद इटनीले बताए । यस बैंकले एटिम सेवा समेत उपलब्ध गराएकाले स्थानीयवासीहरु बढी भन्दा बढी लाभान्वित हुने समेत उनले जानकारी दिए ।
सो बैंकले आजै मकवानपुरको हेटौडा र चितवनकै इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि शाखा उद्घाटन गरेको छ । हेटौडामा बैंकका अध्यक्ष रोशन केसी र इच्छाकामनामा बैंकका संचालक राममान श्रेष्ठले त्यहाँ आयोजित कार्यक्रमका बिच शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । यस बैंकको गत आश्विन मसान्तसम्म रु. ७७ अर्ब निक्षेप र ७१ अर्ब कर्जा प्रवाह रहेको छ भने सो अवधिमा ३७ करोड खुद मुनाफा रहेको छ । बैंकको हालसम्म ८६ वटा शाखा, २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर तथा ३८ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा रहेको छ । बैंकले १ सय २६ स्थानबाट ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सुविधा दिँदै आएको छ भने यस बैंकले देशभर १ सय ६ वटा एटिमहरु संचालनमा ल्याएको छ ।